Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Tshintshela Trinidad and Tobago dollar Ukuze Kwanza » I-Trinidad kunye neTobago Carnival nokuba yi-BIGGER ngo-2022
Tshintshela Trinidad and Tobago dollar Ukuze Kwanza • inkcubeko • Iindaba zefashoni • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Safety • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
I-Trinidad kunye neTobago's Carnival zihlala zisebenza kwibala le-Carnival.. La ngamagama oHloniphekileyo uRandall Mitchell, uMphathiswa wezoKhenketho, iNkcubeko, nezobuGcisa baseTrinidad naseTobago.
Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho, iNkcubeko kunye nezoBugcisa liza kuqhubeka nokubandakanya abachaphazelekayo ukuze baphonononge indlela iTrinidad neTobago ezinokugcina ngayo ixesha kunye nekhalenda yeCarnival yamazwe aphesheya ukuqinisa indawo yeli lizwe njengekhaya leCarnival.
Mhlekazi URandall Mitchell
“Sizakuqhubekeka ukubeka phambili impilo yesizwe ngaphezulu kweenzuzo zexeshana zoqoqosho. Kodwa ke siyayiqonda nento ethethwa yiCarnival kwiTrinidad naseTobago, ke ngoko, uMphathiswa uzakuqhubeka nothethathethwano nabachaphazelekayo ukuze bacinge ngombhiyozo ohlonipha ezo zithethe kwaye uhambelana nemigaqo yezempilo, utshilo uMphathiswa wezoKhenketho, iNkcubeko kunye nezoBugcisa. oHloniphekileyo uRandall Mitchell.
NgoMvulo we-28 kweyoMsintsi 2020 Inkulumbuso uGqirha oHloniphekileyo uKeith Rowley ubhengeze ukuba iTrinidad neTobago azizukubamba iCarnival 2021 ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
UMphathiswa uMitchell uvumile ukuba ayinakuba lishishini njengesiqhelo kwaye kubalulekile ukuba impilo nokhuselo lomntu wonke lungabekwa emngciphekweni.
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, uMphathiswa ebexoxile nabachaphazelekayo kwiCarnival kunye neKhomishini yeSizwe yeeCarnival (NCC). Ngexesha leentlanganiso bekucacile ukuba kukho imfuneko yokuba iTrinidad neTobago zigcine indawo yazo kwikhalenda yeCarnival yamazwe ngamazwe ukuqinisekisa ngeenzuzo zoqoqosho nezentlalo zexesha elizayo kunye nokuqinisa indawo yethu njengekhaya leCarnival.
“ITrinidad kunye neTobago kufuneka zikhokele kwaye zinike umhlaba umlinganiso oza kulandelwa ukuba umnyhadala onjalo unokugcina njani ingqalelo kwihlabathi liphela. Kunyanzelekile ukuba nantoni na eqikelelweyo ithathele ingqalelo imeko yethu entsha ngaphandle kokutyeshela imigaqo yezempilo, ”utshilo uMphathiswa uMitchell.
I-Trinidad neTobago zibambe ngempumelelo i-Premier League yeCaribbean, i-CPL 2020 yeqakamba ebonelela ngesicwangciso sokwenza imicimbi emikhulu ngexesha lobhubhane. Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho, iNkcubeko kunye nezoBugcisa nabachaphazelekayo baya kuthi basebenzise izifundo abazifundileyo kula mava nakwezinye iziganeko zokhenketho nenkcubeko.
Tshintshela Trinidad and Tobago dollar Ukuze Kwanza Carnival ihlala iphambili kubume beCarnival, kwaye iya kubeka isiseko seCarnival 2022 enkulu nangcono.
IKiribati igcina imida ivaliwe kodwa uqeqesho lokubuka iindwendwe ...